थारु समुदायमा "भलमन्सा" थारू पुरुष मात्रै किन? - Malayakhabar
होम पेज फिचर थारु समुदायमा “भलमन्सा” थारू पुरुष मात्रै किन?
थारू समाज पनि पितृसत्तामा अडेको छ।
तस्बिरमा लेखक इन्दु थारु
मेरी आजी निकै जवान हुँदा नै मेरो आजा बित्नुभयो । आजीको विवाह उहाँको देवरसँग भयो । मलाई लाग्दैन कसैले पनि मेरो आजीको चाहना बुझ्यो होला, उहाँलाई केटा मन परेको छ÷छैन भनेर । कैयाँै विधवा महिलाहरूको विवाह देवरसँग हुँदा, महिलाको उमेर देवरको भन्दा निकै जेठो हुन्थ्यो । कैयौँ विधवा महिलाको विवाह १०/१२ वर्षको बच्चासँग गराइन्थ्यो । एक परिपक्व महिलालाई विवाह वा दोस्रो विवाह गर्दा केटा छान्ने स्वतन्त्रता थिएन ।
भित्र्याउँदाका बखत घरभित्र गरिने संस्कार गर्दा घरको सबै झ्यालढोका थुन्नुपर्छ । गाउँका मान्छेले पुरुष भित्र्याउने घरलाई घेरा हाल्छन् । लौराले सुसज्जित गाँउलेहरूले त्यो घरको भित्ता र छानोमा ठटाउँछन् । घरमा नोक्सान पुर्‍याउँछन् ।
जबकि छोरी मान्छेलाई विवाह गरी भित्र्याउँदा गाउँभरिकालाई डाकेर भोज खुवाइन्छ । पुरुषलाई भित्र्याउँदा घरमा क्षति पुर्‍याइन्छ । ती पुरुष र तिनका सन्तानलाई बाँचुन्जेल हेयका दृष्टिले हेरिन्छ ।
थारू महिलाहरू आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय र समग्रमा राष्ट्रको कल्याणका लागि अभिन्न छन् । गाउँसमाजको अगुवाइ गर्नेबाट आफू वञ्चित भए तापनि आफ्ना प्रियजनका लागि अवसर सिर्जना गर्छन् । भलमन्सा, चिरक्या, गुरुबा हुने प्रत्येक पुरुषका घरायसी काममा अधिक सहयोग पुर्‍याउने महिलानै हुन् । तथापि महिलाको योगदानलाई मूल्यांकन गरिँदैन, न त मुआब्जानै दिइन्छ । आफ्नो समुदाय र देशका लागि थारू महिलाहरूले लगातार काम गरिरहे, तर समुदाय र देशले तिनका लागि के गर्‍यो ? न्यायिक आवाजसमेत उठाइदिँदैन कसैले । थारू महिलाको वास्तविक स्थिति पुष्टि गर्ने जानकारी बरु लुकाइन्छ ।
महिलाहरू घरबाहिरको करिअर निर्माण गर्नुमा सर्वव्यापी समर्थन देखिन्छ अहिले । तर, पनि समाजमा महिलाका लागि प्रतिबन्ध अझै अवस्थित छ, जसले बताउँछ कि गर्नुपर्ने अझै धेरै छ । कुनै पनि समुदायको महिला शसक्त र स्वतन्त्र हुन सार्वजनिक जीवनमा कति सक्रिय छन् भन्ने एउटा पाटो त हो नै । घरायसी काममा लैंगिक समानता अनि बरोबर हिस्सेदारी नभई सही अर्थको स्वतन्त्रता लैंगिक समाजले महसुस गर्न सक्दैन । साभार : इन्दु थारु / नयाँ पत्रीका दैनिकबाट
अघिल्लो लेख संक्रमण बढी भएका स्थानहरुका शैक्षिक संस्था कम्तिमा तीन सातासम्म बन्द गर्न प्रस्ताव।
पछिल्लो लेख आईपीएल क्रिकेट : चेन्नइमाथि सानदार जित निकाल्दै दिल्लीको सुखद सुरुवात।